Mma ọchị | Best Way to whiten Ezé Guide
Best Way to whiten Ezé Guide
whiten ezé , ezé whitening , Nha nha whitening na ngwaahịa
Home Dabere na whiten Ezé
Whiten Ezé Atụmatụ
posts akpado "ịma mma ọnụ ọchị"
Whiten ezé gị na ndị a na Easy
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere whitening ezé gị ma mgbe niile ekwetaghị na usoro na ndị maghị ebe ị na-amalite, mkpa ka ị gụọ na. Ị ga-ahụ a dịgasị iche iche nke aro n'isiokwu a na-enyere gị aka ịghọta whitening ezé usoro, kwe gị iji nweta ihe bast-apụta na o kwere omume.
Ele anya maka staining oriri na mgbe a whitening ọgwụgwọ. Ezé gị ga-ntụpọ ọzọ mfe mgbe ha na e whitened. Mgbe whitening, -agbalị ịnọ n'ebe nri na ihe ọṅụṅụ na-ọchịchịrị na agba. Zere kọfị akpan akpan n'ihi na ọ nwere ike nweta n'ime top oyi akwa nke ezé gị ma belata ihie nke ọnụ ọchị gị.
NDỤMỌDỤ! Eji organic aki oyibo mmanụ maka eke ezé enwu gbaa. Swishing mmanụ gburugburu ọnụ gị maka gburugburu nkeji iri kwa ụbọchị nwere ike n'ụzọ dị irè whiten ezé gị.
Lemons na oroma bụ isi na ya nweta Vitamin C, ma ha nwekwara ike whiten ezé gị. Gbalịa rubbing n'ime a lemon ma ọ bụ oroma bee ga-ete on ezé gị iji nweta ha acha ọcha. I nwedịrị ike tinye ntakịrị bit nke nnu na peels aka na anya na ya pụta na usoro a ga-ewetara.
Nagide mmiri soda-asa ezé gị. Iji whiten ezé gị ndammana, mmiri soda arụ ọrụ ebube. Jide n'aka na-abọ jiri nwayọọ mgbe eji mmiri soda, o nwere ike ime ka úkwù ezé na agbụ n'ihi na ụfọdụ ndị.
NDỤMỌDỤ! Iji mee ka a arụrụ n'ụlọ enwu gbaa ntacha eze eji peroxide na mmiri soda weere ke hà akụkụ. Iji nke a ngwakọta-asa ezé gị ruo ihe dị ka nkeji iri.
Ihe mbụ unu ga-eme iji nweta acha ọcha ezé bụ na-agachi eze cleanings. Bilie gị ezé kpochara ọ bụla ọnwa isii ma na-eme gị n'ọdịnihu oru mgbe ke ụlọ ọrụ maka gị ugbu a ihicha.
Ịṅụ oké mmiri bụ oké Usoro enyere na-ezé gị na-acha ọcha. -Aṅụ ezigbo mmiri ga itucha ọnụ gị, -egbochi stains si iwuli elu on ezé gị. Ọ bụ ezi omume na-aṅụ mmiri, karịsịa n'oge na mgbe anyị risịrị nri.
NDỤMỌDỤ! Chọrọ ezé gị anya acha ọcha? Eri ihe udara. Apụl dị nnọọ abrasive ha ga ọcha ezé gị ngwa ngwa enweghị na-eme ihe ọ bụla mebiri na Enamel ezé gị.
Eri ahụ ike ihe oriri; ndu oriri dị ka mkpụrụ osisi ma ọ bụ akwụkwọ nri ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ acha ọcha ezé. -Agbalị izere ndị dị otú ahụ oriri mgbe niile kwere omume iji nyere gị ezé ahụ nọgide na. I kwesịkwara zere snacking ukwuu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-amụmụ ọnụ ọchị na-enwu gbaa.
Jiri a ahịhịa mgbe ị na-aṅụ ọ bụla gbara ọchịchịrị dị mmiri mmiri. A ahịhịa whitens ezé iwetulata ego nke oge ọ na-ewe gị onunu ka n'iku ezé. Site na ịga na ogologo ala akpịrị na-enwe ntakiri na kọntaktị na Enamel, e nwere obere staining na achagharị.
NDỤMỌDỤ! Mgbe gị na-enwe a ezé whitening usoro, ọ dị mkpa ka ị na-aṅụ doro anya mmiri mmiri maka dịkarịa ala atọ na anọ ụbọchị. Na ndị a na mmalite,, na ụdị nile nke na agba site na mkpụrụ osisi na ọchịchịrị ọṅụṅụ nwere ike ina etinye obi gị dum n'ime ezé gị.
Ọ bụrụ na e nwere okpueze n'ọnụ gị, ezé gị nwere ike whiten; Otú ọ dị, gị okpueze ga-anọgide otu na agba.
Ọ bụrụ na ọsọ na arụmọrụ bụ gị n'elu ezé-whitening na-ebute ụzọ, nweta onwe gị ka gị na dọkịta ezé ASAP. E nwere ọtụtụ uru na-ezé enwu gbaa nwere ike inye gị, ọ bụ ezie na o nwere ike akpatara anyị ọdachi dị ka nke ọma. Ọ bụ ihe amamihe ịkpọ gị dọkịta ezé tupu ị nwaa whiten ezé gị, iji hụ na ha na-ahụ ike, na stains na-adịghị mere site kpatara nsogbu. Egwu ya mma; melite a gbasiri ike ma dị irè atụmatụ maka whitening ezé gị na gị dọkịta ezé enyemaka.
NDỤMỌDỤ! Ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga, gị kasị dị irè whitening ezé gị na-enye elu àgwà. Ọ bụ na-enweghị isi na-emefu ego ezé whitening na ngwaahịa ma ọ bụrụ na ị na-anọgide na-ese anwụrụ.
-Asa ezé mgbe ọ bụla nri ga-enyere na-ha si stains. Nke a bụ maa ezi mgbe ọ na-abịa kọfị.
-Asa ezé na-enyere echebe ha. Bulie a mma ntacha eze, onye na-akpata ịlụ ọgụ cavities ma na-enyere whiten ezé. E nwere dị iche brands, otú na-eme nnyocha ha pụrụ inyere gị aka ịhụ nke na-arụ ọrụ maka ezé gị.
NDỤMỌDỤ! Ọ bụrụ na ị Akpara na-echefu waya nkwado na-adịghị anya, otu nkwanye bụ na ị whiten ezé gị tupu usoro amalite. Ọ bụrụ na i mee nke a ndụmọdụ, ị ga-ejedebe na ezé na-abụghị nanị straighter, ma acha ọcha dị ka nke ọma.
Na-aṅụ mmiri mgbe mgbe ga-enyere gị na acha ọcha ezé. Rinsing ezé gị na mmiri nwekwara ike sachap ahụ na nwere ike ime nha nha achagharị. Eme ka ọ bụrụ àgwà anyị ṅụọ mmiri gị nri na n'oge nri.
Ịkwụsị iji mouthwash. Ịcha mouthwash si otú ndụ gị gaara dozie nsogbu unu na-enwe na ịnọgide na-enwe na-acha ọcha ezé. Mouthwash mee nke ọtụtụ emerụ ọgwụ. Ụfọdụ n'ime ndị a ọgwụ nwere ike n'iku na discolor ezé gị.
NDỤMỌDỤ! Otu ụzọ iji nyere aka ezé ga-anọgide na-acha ọcha bụ na ọ bụghị-aṅụ ọtụtụ adụ ọṅụṅụ. Mmanya ọtọ bịrịbịrị nwere agba? Na discolors na stains ezé.
Eri cheese mgbe a nri nwere ike inyere ndị ịnweta ọdịnaya ezé gị. Research na-egosi na calcium-enye gị ezé Enamel a ohere iji wughachi.
Ihe ndị magburu onwe ezé whitening n'ọnụ bụ iji ukpa osisi n'ụgbụgbọ. Ime nke a na ụdị n'ụgbụgbọ ka ezé na-amị oké enwu gbaa mmetụta, ọ na-enyekwa miri ihicha. Ị kwesịrị ị na itucha si n'ọnụ gị na juputara asa ezé gị mgbe iji n'ụgbụgbọ.
NDỤMỌDỤ! Mmiri soda nwere ike ji mee ka a jiri nwayọọ abrasive ntacha eze na kwa whitens ezé gị mgbe weere peroxide. Asa ezé gị na iji ngwakọta nke chawapụrụ ezé-enweghị emerụ ọgwụ.
Eri oriri na a crunch pụrụ ịdị nnọọ irè. Foods, dị ka karọt ruo na apụl, enyere ịnọgide ezé gị acha ọcha. Nri na-crunchy nwere ike ihicha gị ezé mgbe ị na-ata. Na-elekọta na-eri ha na ha dum ọnọdụ, kama slicing ma ọ bụ dicing ha.
NDỤMỌDỤ! Eri ihe Mmiri ara ehi oriri. Ihe dị ka cheese, ara-ehi na bred nwere nri na ha na-eme ka ike, ike-na-achọ ezé.
Unu mara na ọ bụla enwu gbaa na usoro na-arụ ọrụ na eke ezé. Ọ bụrụ na ị nwere eze na-arụ ọrụ dị ka veneers, veneers, okpueze ma ọ bụ n'oghere ke n'ihu ọnụ gị, ha agaghị agbanwe na agba. Whitening gị eke ezé nwere ike ime ka eze na-arụ ọrụ riputasi dị ka a akpịrị isi mkpịsị aka.
Gbalịa a saltwater ngwakọta na whiten ezé gị. Mix ọkara a teaspoon nkume nnu na otu iko mmiri ma ọ nọdụ ala n'ebe ahụ ruo ihe dị ka nkeji ise. Ikwacha akpiri na nnu mmiri, kama mouthwash. A Usoro pụrụ inye aka belata bacteria aka n'awa ole nke cavities n'ọnụ gị.
NDỤMỌDỤ! Dị iche iche mkpụrụ osisi nye gị a enem irè ụzọ na-adịkarị-eme ka ezé gị acha ọcha. Ọmụmaatụ, strawberries pụrụ ịdị nnọọ irè.
Mgbe trays adịghị mma n'isi, na ọgwụ ike mfe emetụta chịngọm ebe na-eme ka mgbakasị ahụ ma ọ mbufụt.
E nwere ọtụtụ mma ma dị mfe ụzọ iji whiten na dịtụrụ gị ezé ahụ na-anaghị eri a uba. A oké ụzọ bụ iji mejuputa ojiji nke mmiri soda. E nwere toothpastes na-ebu mmiri soda nke ị nwere ike ịzụta, ma ọ bụ nanị iji stof gị kọbọd n'ụlọ.
NDỤMỌDỤ! Adịghị iso na-aṅụ sịga sịga ma ọ bụ sịga. Ndị a ga-eme ka ezé achagharị.
Mgbe whitening toothpastes enweghị ike nke ndị ọzọ whitening ụzọ, ha nwere ike igbochi ma ọ bụ tufuo ọhụrụ stains. Ndị a toothpastes eji a silica abrasive na-agaghị emebi Enamel.
Gbalịa iji ụfọdụ nnu mgbe ị asa ezé gị. A mfe, ma dị irè atọ ka whitening ezé gị na-brushing na nnu. Ị ga itucha ọnụ gị juputara mgbe ọ bụla brushing. N'ihi na ọ bụ abrasive, ekwela ka ọ je na-eleghara ya na nnu.
NDỤMỌDỤ! Mgbe nri, -ata whitening chịngọm ka ịna-agba iji chebe gị ọnụ ọchị. Ụfọdụ ụdị nke chịngọm na-formulated na whiten ezé gị.
Ị kwesịrị ị na abọ, nakwa dị ka itinye a chịngọm ịhịa aka n'ahụ. The ụzọ kasị mma iji hụ na gị ọnụ ọchị mụ acha ọcha bụ nanị abọ na floss mgbe eri. Nke a na-enye ohere ị na-nkasi nke ihe oriri fọduru na ihe e dere ede tupu ha na-ewuli elu ma na-eme ka ihe ọ bụla mebiri.
A banana bee nwere ike ji mee mgbe ị asa ezé gị. Nke a bụ a dị mfe usoro na ọtụtụ ndị na-aṅụ iyi ọrụ. -Ete n'elu ezé gị na banana bee tupu brushing ha. Mgbe ahụ abọ ị ezé otú ahụ gị mgbe niile na-eme. Ị ga-ahụ ozugbo na ezé gị.
Yellow ezé bụ mfe kwesiri ngosi ịrịba ama nke onye na onye na-ese siga. Ọ pụrụ isi na-a na-egbuke egbuke-acha ọcha mgbe ị na-aṅụ sịga. Ọ bụrụ na ị ga-aṅụ sịga, -agbalị na-aṅụ sịga a obere obere otú i nwere ike ịbụ ihe ike ma maa mma ezé.
Whitening ezé gị bụ oké ụzọ n'ụzọ nkịtị mma na àgwà nke ndụ gị. Acha ọcha ezé abụghị nanị na-eme ka ị ọtụtụ ihe ndị ọzọ mara mma; ọ na-enyere gị aka inwe obi ike n'ebe ọha mmadụ. Ị ga-ahụ na ị na-enwekwu ọchịchọ esi na-eme ihe ndị ọzọ ndị mmadụ. Tee a Atụmatụ jirichaa gị pụta, na iru ha ngwa ngwa, ngwa afforadably.
-Akpa na-ekwu okwu - Kedu ihe ị chere?
Ihe site whiten Ezé Guide - June 5, 2016 na 12:32 AM
Categories: Home Dabere na whiten Ezé Tags: ịma mma ọnụ ọchị, ìhè gị ọnụ ọchị, whiten ezé gị, Whiten ezé gị Easy, whitening ezé gị
-Enwe obi ike Ezé Gị na White Ezé
Ndụmọdụ nke Rụpụtara mgbe ị na-whiten ezé gị
Whitening Ezé Atụmatụ Ị Pụrụ nwalee Today!
Easy, Ọnụ Ụzọ dịtụrụ Ezé Gị
A Kwụsị ahụ Yellow ochi ma na-A Bright White Ọchị
banye stains Ntụ iji koo achịcha ịma mma ọnụ ọchị ụzọ kasị mma whiten ezé Dịtụrụ Ezé Gị ìhè gị ọnụ ọchị Bright White Ọchị dazzle ọchị Dental cleanings dọkịta ezé n'ọnụ ụlọ Esi A Bright White Ọchị home ezé enwu gbaa home enwu gbaa otú whiten ezé otú whiten ezé gị laser ezé enwu gbaa Laser whitening ezé eke ụzọ whiten ezé wepụ achagharị Wepụ Ezé Stains ọnụ ọchị dazzle strọberị ezé bleaching kit ezé chawapụrụ ezé-elekọta ezé gbasiri ike ezé Stains ezé enwu gbaa ezé odo Atụmatụ na iji Gbochie Ezé Stains ntacha eze Nha nha whitening na ngwaahịa vitamin C Whitening Ezé Atụmatụ Ị Pụrụ nwalee Today! whitening ezé gị whiten m ezé whiten ezé whiten ezé n'ụlọ whiten ezé gị Whiten ezé gị Easy acha ọcha ọnụ ọchị acha ọcha na-egbuke ezé -acha ọcha ezé -acha ọcha ezé Atụmatụ Yellow ochi
WordPress na, site na HeatMapTheme.com